လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အထူးသင်တန်း(Pilot May-CVT) အတွက်သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း
ဖန်တီးမှု နှင့် အခွင့်အလမ်းများ
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အထူးသင်တန်း(Pilot May-CVT) အတွက်သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. How to register read at http://goo.gl/A7n9y4 To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.
Thread: လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အထူးသင်တန်း(Pilot May-CVT) အတွက်သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း
05-02-2018 01:31 PM #1
Thanked 755 Times in 262 Posts
အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းအောင် (သို့) ဆယ်တန်းနှင့် ညီမျှသောပညာ သင်ယူခဲ့ပြီး၊ သက်မွေးပညာသင်တန်း တက်ရောက်လိုသော၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေနေသော လူငယ်များအတွက် CVT Myanmar တွင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာ (စာတွေ့၊လက်တွေ့) တဆက်တည်းသင်ယူနိုင်မည့် ကာလတိုသင်တန်းကို စတင်လျှောက်ထားနိင်ပါပြီ။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်း သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်းများကို CVT Myanmar မှ စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်ဆရာများနှင့် ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလ (၆လ) အထိ သင်ယူပြီး၊ NSSA-level 1,2 စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ပါက စံ နှုန်းသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များကိုပါ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းအတွက် May Bank မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ CVT Myanmar အနေနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေးပေးသွင်းစရာမလိုပါ။ သင်တန်းကာလ အတွင်း ခရီးစရိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက Center for Vocational Training (CVT) နှင့် National Skill Standard Authority (NSSA) အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
• သင်တန်းချိန်- (8:00am-4:45pm)
• အသက်ကန့်သတ်ချက်- 16 နှစ်မှ 22 နှစ်
• သင်တန်းနေရာ- CVT Myanmar
• လျှောက်လွှာပိတ်ရက်- 21 May 2018 (ညနေ ၅နာရီ)
• လျှောက်လွှာလက်ခံရက်- 26 April 2018 မှ 21 May 2018 အထိ
• သင်တန်းကာလ- June 2018- December 2018 (တနင်္လာ၊အင်္ဂါ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ- တစ်ပတ် ၄ရက်)
(အခြေခံပညာရေး ဆယ်တန်း(သို့) ဆယ်တန်းနှင့် ညီမျှသော ပညာရေးအဆင့်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်း ထောက်ခံစာတစ်ခုခု ကို လူတွေ့ ဖြေဆိုချိန်တွင် တပါတည်း ယူဆောင်လာ ရပါမည်။)
ဤသင်တန်းသည် CVT နှင့် May Bank တို့မှဖွင့်လှစ်သောကာလတိုအထူးသင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရုံးချိန်အတွင်းတွင် "၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာ” အား အောက်ဖော်ပြပါရုံး၌ လာရောက်ထုတ်ယူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာပေးပို့ရန် နှင့် အသေးစိတ် မေးမြန်းရန် လိပ်စာ -
အမှတ် (၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းရုံး၊ တတိယထပ်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
ဖုန်း - ၀၁၃၈၃၆၇၆၊ ၀၉၇၃၁၆၆၂၀၆
Email – publicrelationscvt@gmail.com
Website – www.cvt-myanmar.com
မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်သည် ဆွေမျိုးတစ်ရာထက် တန်ဖိုးရှိ၏။
ဘ၀ကို မြတ်နိုးပါသလား။ ဘ၀ကို မြတ်နိုးလျှင် အချိန်ကို မဖြုန်းပါနှင့်။ ဘ၀ဆိုသည်မှာ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ထားသော အရာပင်။
Quick Navigation သင်တန်း Top
MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ
Feed Back Section
ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီိယာပညာ
စာရင်းအင်း/ကိုင် ပညာ (Accouting / statistical section )
စက်မှုပုံစံပြု ဒီဇိုင်း အင်ဂျင်နီယာပညာ
Code of Pratice
Software & Application
စာအုပ်စာတမ်းများ နဲ့ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ်များအခန်း
Rules &amp; Regulations
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အင်ဂျင်နီယာပညာ
Medical &amp; Pharmaceutical
Health, Safety, Security and Environmental Science
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ
Draftsman တို့ သိထားသင့်သော engineer အခြေခံ သဘောတရားများ
CAD , MCAD
X-Steel (Tekla Structure )
CAE , CFD , FEA
Marine Design And Construction Softwares
ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်)
Microsoft Visual FoxPro DBMS
အသုံးချ Application များ
Programming/Web Programming ဆိုင်ရာစာအုပ်များ
အထွေထွေ E-book &amp; Tutorials စာအုပ်များ
ဘူမိဗေဒ နဲ့ အသုံးချ ဘူမိဗေဒ
အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံများ
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရန်ကုန် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မြစ်ကြီးနား )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မိတ္ထီလာ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဗန်းမော် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( လွိုင်ကော် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပြည် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဘားအံ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကလေး )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မော်လမြိုင် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( စစ်တွေ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကျိုင်းတုံ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပင်လုံ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( လားရှိုး )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ကျောက်ဆည် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မုံရွာ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပခုက္ကူ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မကွေး )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( တောင်ငူ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ထားဝယ် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မြိတ် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပုသိမ် )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ဟင်္သာတ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မအူပင် )
ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( မှော်ဘီ )
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( သန်လျင် )
မန္တလေး TTS
ရုပ်ရှင် နှင့် ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်းတွဲများ
Other Asia Movies
မြန်မာစာတန်းထိုး DVD ဇတ်ကားများ
စိတ်ကြိုက် Movie များ
မြန်မာသီချင်း MTV စုစည်းမှု
အင်္ဂလိပ်သီချင်း MTV စုစည်းမှု
စိတ်ကြိုက် MTV စုစည်းမှု
ဇဝန မှ ဟဒယ
FAQ & Request Zone
-- Default Style ---- DarkStyle -- WhiteStyle -- OrangeStyle -- LightGreen Style -- GreyStyle -- OrangeStyle2 -- OrangeStyle3
All times are GMT +6.5. The time now is 07:13 PM.